Maxuu Ahaa’ Heshiiska Sadex Geesoodka Ah Ee Itoobiya, Somaliland Iyo Imaaradka Ku Dhexmaray Abu Dhabi | Marsa News
Maxuu Ahaa’ Heshiiska Sadex Geesoodka Ah Ee Itoobiya, Somaliland Iyo Imaaradka Ku Dhexmaray Abu Dhabi
July 16, 2018 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Dawlada Imaaraadka Carabta ayaa balan qaaday inay laba jibaarayso horumarinta maalgalinta dekeda Berbera si ay u noqoto dekeda ay isticmaali doonto dawlada Itoobiya iyo dalalka kale ee Afrika ee bilaa dekeda ah.
Wargeyska Indian Ocean ayaa cadadkiisii ugu danbeeyay qoray in 28-Jun-2018 ay magaalada Abu Dhabi kulan saddex geesood ah oo balaadhan ku yeesheen wasiirka arimaha dibada Somaliland Dr.Sacad CalI Shire iyo madaxda ugu saraysa shirkada DPworld Suldan Axmed Binu Suleym iyo ku xigeenkiisa iyo wakiilo ka socda dawladda Itoobiya oo ay metelaysay shirkada dawlada Itoobiya ee Ethiopian Shipping & Logistics Services Enterprise (ESLSE).
Waxay saddexda dhinac isku raaceen in la kordhiyo horumarinta iyo maalgalinta dekeda Berbera, iyada oo halkaas agaasimaha DP world ku soo bandhigay mashruuc xarun balaadhin oo kayd ah ay DP world ka samaynayso gudaha Itoobiya, si ay xaruntaasi dalalka kale ee bilaa dekeda ah ee Afrika ugu noqoto suuq ay alaabtu uga sii gudubto.
Wargeysku wuxuu sheegay in dawladda Imaaraadka Carabtu ay balaadhinayso saamaynta ay ku leedahay gobalka Geeska Afrika, taasna ay doonayso in meelaha ay u marayso ay ka mid noqoto dekedda Berbera iyo Itoobiya oo ay isku xidho.
Wuxuu wargeysku soo xigtay kulamadii kala duwanaa ee ay bishii hore yeesheen raysalwasaaraha Itoobiya iyo madaxda dawladda Imaaraadka Carabta.
Ilaa bishii March ee sannadkan wuxuu wargeysku sheegay wuxuu sheegay in Imaaraadka Carabtu diirada saareen balaadhinta dekedda Berbera si ay u suurto gasho inay dekedani la wareegto suuqa ganacsi ee Itoobiya.